China 15Khz 2600w Oscillator Welding Ultrasonic mahery miaraka amina orinasa mpamokatra vy sy orinasa | Qianrong
15Khz 2600w Oscillator Welding Ultrasonic mahery miaraka amin'ny booster vy
hatetika 15 khz
Herin'ny famoahana 2600 watt
Bolt mitambatra M16 * 1
Diamondra kapila vita amin'ny ceramic 60mm
Qty an'ny kapila vita amin'ny seramika 4pcs
Application Masinina mihodina plastika
Ny Oscillator ultrasonic dia antsoina koa hoe vibrator ultrasonic. Ny indostria iray manontolo dia mifandray amin'ny tandroka ary ny tandroka dia antsoina hoe vibrator. Ny vibrator ultrasonic dia fitaovana iray manova ny angovo herinaratra sy angovo mekanika (vibration acoustique) amin'ny alàlan'ny vokatry ny piezoelectric an'ny ceramika piezoelectric, ary manamafy ny sisin'ny taratra tariby eo aloha sy aoriana amin'ny alàlan'ny fampifangaroana impedance akustika.
Ny vibrator ultrasonic dia misy transducer ultrasonic sy tandroka ultrasonic. Ultrason transducer dia fitaovana iray afaka mamadika angovo herinaratra avo lenta ho lasa angovo mekanika. Ny tandroka ultrasonika dia fitaovana mandeha tsy mampisy hovitrovitra. Manova ny amplitude ny fidiran'ny hovitrovitra avy amin'ny transducer ultrasonic fotsiny izy avy eo ary mamindra azy. Fanovana impedance.
Ahoana ny fomba hisafidianana milina plastika ultrasonika misy 20khz sy 15khz matetika?
Ny matetika matetika ampiasaina amin'ny milina fantsom-pandrefesana ultrasonic dia 15khz sy 20khz milina fantsom-boasary ultrasonic. Arakaraka ny maha-avo ny refin'ny ultrasonika no maha tsara kokoa ny laité welding, fa ny kely ny herin'ny havana dia ny kely ny amplitude. Ity manaraka ity dia mamaritra ny fahasamihafana misy eo amin'ny milina fanamafisam-peo 15khz sy 20khz:
Rehefa ambany ny refin'ny ultrasonic dia miteraka tabataba. Rehefa ambany noho ny 20 khz ny matetika dia lasa lehibe be ny tabataba mandritra ny fantsom-pandrefesana ultrasonic. Ho an'ny vokatra plastika manana valindrihana avo lenta kokoa, arakaraka ny maha-avo azy no tsara kokoa. Noho izany, ny milina fantsom-pandrefesana ultrasonic 20khz na avo kokoa dia mety amin'ny ampahany plastika tena manify sy marefo, toy ny karatra SD, na vokatra misy kristaly ao anatin'ny vokatra; Ny milina fantsom-pandrefesana ultrasound 15khz dia mora kokoa ny manitatra ary manana amplitude lehibe kokoa. Izy io dia mety amin'ny fametahana vokatra plastika goavambe, sarotra alefa, somary marokoroko;
Faharoa, ny haben'ny lasitra ultrasonic 15khz sy 20khz dia tsy mifanaraka ihany koa. Ny haavon'ny bobongolo ultrasonic 15khz amin'ny ankapobeny dia 17cm eo ho eo ny halavany, ary ny bobongolo ultrasonic 20khz dia manodidina ny 12.5cm.
Averina indray, ny milina fantsom-boasary plastika 15khz dia afaka manamboatra sangan'asa lehibe kokoa, ary ny hery dia azo zaraina ho 2600w / 3200w / 4200w. Ny milina fantsom-boasary 20khz vita amin'ny plastika dia 900W - 2000w, kely ny herinaratra ary kely ny haben'ny vokatra azo averina.
Previous: Advanced 20Khz 3300w Ultrasonic Welding Replacement CJ20 Transducer miaraka amin'ny Metal Steel Outer Cover
Manaraka: 20Khz 1500w Ultrasonic Welding Transducer miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo vy